7 sababood oo kaneecada kugu soo jiidanaysa
Haddii aad waydiiso noolaha aduunka ugu khatarsan, waxa ay u badantahay in ay maskaxdaada ku soo dhacayso xayawaanka ugaadha ah, shark, caarada sunta ah iyo jellyfish iyo makhluuqa kale ee cabsida leh. Laakiin haddii aad arrinta ka eegto dhinaca tirooyinka, cadowga ugu weyn ee bini'aadmigu wuxuu noqon doonaa ... kaneecada.
Xayawaanka ugu dilaan adduunka / Gates Notes oo ka socda hay'adda Bill Gates Foundation ayaa ku qiyaastay in cudurrada ay fidiyaan dhiig-yacabyadan ay dilaan 725,000 oo qof sannadkii. Marka la barbardhigo: celcelis ahaan adduunka oo dhan waxaa ka dhaca dilal gaaraya 475,000 sannadkii. Iyo dhammaan noocyada shark-yada halkaas ku dhib yar inay keenaan dhibcaha 10. Guud ahaan, tirooyinka ayaa si cad u muujinaya cidda halkan ugu badan.
Guud ahaan, kaneecada intooda badani waa khudradda, waxay cabbaan casiirka dhirta. Laakiin si ay u qaadaan oo ay ukun u dhalaan, dumarku waxay u baahan yihiin cunto borotiin ah, waxayna ka helaan dhiigga. Sidaa darteed kaneecada ... kaneecada ... guud ahaan, wakiilada jinsiga caddaaladda ee kaneecada ayaa u baxa inay ugaarsadaan habeenkii. Waana kuwan qodobbada kordhinaya fursadahaaga inaad kufto iyaga.
1. Waxaad ciyaartaa isboorti badan, waxaanad leedahay jir jir weyn
Sawirka: Sven Mieke / Unsplash
Kaneecadu waxay leedahay hab ur ah oo horumarsan waxayna raadisaa ugaadhsiga inta badan ur. Calaacadaha maxillary ee dhiig-cabayaasha waxay ku qalabaysan yihiin Kaneecada Detect Carbon Dioxide/ Weydii Dabeecada oo leh neurons dareen gaar ah oo qabta kaarboon laba ogsaydh, ama CO2. Tani waa qodobka ugu muhiimsan ee soo jiidashada cayayaanka.
Marka loo eego Sababta ay dadka qaarkii u yihiin magnets kaneecada / NBCnews ee Jonathan Day, borofisar ku takhasusay cilmiga cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Florida, qaddarka kaarboon laba ogsaydh ee ay soo saaraan dadku waxay kuxirantahay dheef-shiid kiimikaad. Dadka jir ahaan firfircoon oo leh cufnaanta murqaha waxay u badan tahay inay ku dhacaan F. van Breugel. Kaneecadu waxay adeegsataa aragga si ay ugu xidho urta urta ee bartilmaameedyada kulaylka ah / kaneecada bayoolajiga hadda.
Marka lagu daro CO2, ciyaartoydu waxay sii daayaan ur xooggan oo lactic acid ah, gaar ahaan inta lagu jiro jimicsiga, acetone ee neefta, iyo estradiol, sheyga burburka ee estrogen.
Sidaa darteed, dadka waaweyn ee leh dheef-shiid kiimikaad sarreeya, cayaartoyda iyo moodooyinka jirdhiska ayaa had iyo jeer u taagan qoriga dhiig-cabista. Intaa waxaa dheer, dadka waaweyn aad bay ugu fududahay kaneecada inay ogaadaan. Guud ahaan, dadka borotiinka jecel laftoodu waa isha wanaagsan ee borotiinka.
XalkaHa ciyaarin ciyaaraha Waa kaftan, waad tababbari kartaa, laakiin waxaad u baahan tahay inaad si fiican u dhaqdo ka dib oo aadan ku ordin meelaha dhexdadu ku ururto.
2. Waxaad jeceshahay inaad xidhato madow
Sawirka: Tobias van Schneider / Unsplash
Dharka madow waxay u muuqdaan kuwo quruxsan. Dad badan ayaa sidaas u haysta. Kaneecada sidoo kale.
Xaqiiqdu waxay tahay in aragga cayayaankani aanu u qotomin sida dareenka urta. Kaneecada waxay awood u leedahay F. van Breugel. Kaneecadu waxay isticmaashaa aragga si ay ugu xidho urta urta bartilmaameedyada kulaylka / noolaha hadda jira waxay eegtaa qofka meel fog oo ah 5 ilaa 15 mitir, haddii aad la yaabban tahay.
Taneshka Kruger, oo ah maamulaha Machadka Xakamaynta Duumada ee Jaamacadda Pretoria, ayaa ku andacoonaysa ma doonaysaa in kaneecada ay ku dhaafto? Ha xidhin dhar mugdi ah / Insider Business in ay kaliya ku arkaan silhouettes waa weyn oo meel bartilmaameed ah. Midabada mugdiga ah ayaa si aad ah uga dhex muuqda beertooda aragga, sidaas darteed cayayaanka ayaa u duula si ay u arkaan waxa aadka u weyn, madow iyo kuwa xiisaha leh ee halkaas ku dhacaya.
Intaa waxaa dheer, dhiig-cabista sidoo kale waxay jecel yihiin cagaarka, casaanka, iyo midabada kale ee firfircoon, sida uu aasaasay Edgar JM Pollard. Kordhinta ururinta kaneecada ee ka imanaysa shaashadaha xannibaadda: saamaynta naqshadaynta jireed iyo halbeegyada hawlgalka / dulin & Vectors Edgar Pollard oo ka tirsan machadka caafimaadka kulaylaha iyo caafimaadka ee Australia.
Jid ahaan, zebras ayaa soo saaray qaab muuqaal ah, dildilaacyo madow iyo caddaan ah, kuwaas oo jahawareersan duqsiyada tsetse, duqsiga fardaha iyo cayayaanka kale. Cilmi-baarayaasha Japan ayaa aqoonsaday T. Kojima. Lo'da lagu rinjiyeeyay xariijimaha zebra-ka oo kale waxay ka fogaan kartaa qaniinyada duqsiga/PLoS One, lo'da habkan loo rinjiyeeyay iyana aad bay ugu nugul yihiin xanta, sida muuqata, dhiig-gooyeyaasha ayaa la yaabay daabacaaddan oo kale.
Tijaabooyin lagu sameeyay bini'aadamka, si kastaba ha ahaatee, lama samayn, sidaas darteed lama oga inta u ekaanshiyaha zebra uu ka ilaaliyo kuwa dhiig-yacabka ah. Haddii aad gacanta ku haysato funaanad xariijimo madow iyo caddaan ah, isku day inaad xidhato oo la wadaag natiijadaada faallooyinka.
XalkaMidabada jilicsan. Cadaan, pastel, beige, khaki iyo hadh saytuunka ah ayaa kaa dhigaya mid aad u yar oo ka muuqda kaneecada. Maya, dabcan, haddii kaneecadu u soo dhawaato, wuxuu weli qiyaasi doonaa inaad tahay mid la cuni karo. Laakiin wuxuu aad u xiiseyn doonaa dadka ku labisan dharka madow.
3. Waad dhidid iyo qandho
Sawirka: un-perfekt / Pixabay
Marka si adag loo hadlo, ma aha oo kaliya dadka ciyaara ciyaaraha badan, laakiin sidoo kale qof kasta oo dhididka kordhay ayaa hoos yimaada baaritaanka kaneecada. Uric acid iyo ammonia oo ku jira calaamad dhididka JI Raji. Kaneecada Aedes aegypti waxay ogaataa kacsanaanta aysiidhka ah ee laga helay urta bini'aadamka iyadoo la adeegsanayo Jidka IR8a / noolaha hadda jira gorgorku waa inuu duulaa si uu u arko waxa aad u macaan.
Waxay u ekaan kartaa sida buufinta basbaaska ama kolojku uu ku filan yahay inuu la dagaallamo urta dhididka. Laakiin, sida laga soo xigtay Tani waa sababta ay kaneecada u bartilmaameedsato dadka qaar si ka badan kuwa kale / Self Dr. Gary Goldenberg, agaasimaha caafimaadka ee Waaxda maqaarka ee Icahn School of Medicine, cadar qaar ka mid ah, lid ku ah, kaliya soo jiidan dhiig-yari badan. Kaneecadu waxay si gaar ah u soo jiidataa caraf udgoon.
XalkaLa dagaallama dhididka sii kordhaya, ama hyperhidrosis, taas awgeed waxaad u baahan tahay inaad ballan la yeelato dhakhtarka maqaarka. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la dhaqo marar badan bangi.
4. Uur baad leedahay
Sawirka: Anastasiia Chepinska / Unsplash.
Hal daraasad oo lagu sameeyay Gambia ayaa lagu aqoonsaday R. Dobson. Kaneecada door bidaan haweenka uurka leh / BNJ, in nasties jira laba jeer sida firfircoon xiiso haweenka uurka leh.
Cilmi-baadhayaashu waxay qiyaaseen in tani ay sabab u tahay korodhka mugga kaarboon dioxide ee ay sii daayaan. Sidoo kale.Haweenka uurka leh, heerkulka jidhka waxa la kordhiyey ilaa 0.7 ° C. Waxayna labadan arrimood saameeyay muuqalka kaneecada.
Guud ahaan, natiijada tijaabadan waa in laba jeer la hubiyaa, sababtoo ah 72 maaddo oo keliya ayaa ka qayb qaatay. Laakiin waxaa jira xoogaa run ah halkan.
XalkaQaadashada baaritaanka uurku weligeed ma dhibayso.
5. Waxaad leedahay kooxda dhiigga koowaad
Sawirka: Machadka Qaranka ee Kansarka / Unsplash
Haa, cilmi baaris ayaa muujisay Y. Shiri. Doorbida soo degista ee Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) ee maqaarka Aadanaha oo ka mid ah Kooxaha Dhiiga ABO, Xoghayayaasha ama Nonsecretors, iyo ABH Antigens / Journal of Entomology Medical in dadka qaba kooxda dhiigga togan ay ku dhawaad ​​laba jeer soo jiidanayaan kaneecada sida kuwa leh ilbiriqsi. .. Ka saddexaad iyo kan afraad ee miisaanka mudnaanta kaneecada waxay ku yaalliin qiyaastii kala bar dhexdooda. Hadda la noolow macluumaadkan.
XalkaMar haddii aanay suurtogal ahayn in la beddelo kooxda dhiigga, waxa hadhay oo dhan waa in la heshiiyo.
6. Lugaha ma dhaqdo
Sawirka: Huỳnh Tấn Hậu / Unsplash.com
Hal tijaabo maya Verhulst. Halabuurka 2011 ee Maqaarka Maqaarka Bani'aadamka Waxay Saamaynaysaa Soo Jiidashada Kaneecada Duumada / PLoS Mid waxay muujisay xidhiidh xooggan oo ka dhexeeya tirada bakteeriyada ku nool maqaarka iyo xiisaha kaneecada ee goobta. Dadku waxay ku leeyihiin anqawyada iyo cagaha ugu weyn ee unugyada yaryar, sidaas darteed dhiig-yariyaasha waxay eegaan lugahaaga qaawan iyagoo xiiso weyn u leh.
XalkaCagaha iska dhaq. Ha ka soo bixin daboollada hoostooda.
7. Ma jeceshahay biirka
Sawirka: Gerrie van der Walt / Unsplash.com
Tijaabooyinka qaar ayaa muujinaya in kaneecadu ay aad u jecel yihiin inay cabbaan dhiigga dadka sakhraansan. Tusaale ahaan, hal daraasad, O. Shiri. Cunista khamriga waxay kicisaa soo jiidashada kaneecada / Joornaalka Ururka Xakamaynta Kaneecada Mareykanka, saynisyahano ka socda Ururka Xakamaynta Kaneecada Mareykanka ayaa ogaaday in maadooyinka cunay 350 ml oo biir ah ay si aad ah u soo jiiteen dhiig-cabayaasha. Natiijooyin la mid ah ayaa waxaa muujiyay T. Lefèvre. Cunista Beerku waxay kordhisaa soo jiidashada bini'aadamka kaneecada duumada / PLoS Mid waa tijaabo kale oo ay sameeyeen khubaro u dhashay Burkina Faso.
Waxaa laga yaabaa inaad u maleyso in kaneecadu ay rabaan inay kula sakhraansanaadaan, laakiin ma aha. Ma jiro ethanol ku filan dhiigga ay cunaan si uu saameyn muuqata ugu yeesho fayoobaanta cayayaanka. Si kastaba ha ahaatee, cayayaankani waxay inta badan cabbaan dhiigga dadka sakhraansan. Sida muuqata, waxay garanayaan wax ku saabsan biirka oo aynaan garanayn.
XalkaJooji cabbitaanka, ugu yaraan hawo nadiif ah.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 7 sababood oo kaneecada kugu soo jiidanaysa!